Bayaan ku duugan heshiisyada iswaafajinta Imaaraatka Carabta (UAE) iyo Baxreyn ee lala galay Israel, oo uu garwadeenka ka yahay Mareykanka, ayaa horseedi kara kala qeybinta xarunta Al-Aqsa maxaa yeelay waxay ku xad gudbeysaa sida ay hadda tahay, falanqeeyayaasha ayaa leh.
Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay NGO-ga ‘Terrestrial Jerusalem (TJ), bayaanadaasi waxay calaamad u yihiin “isbedel xagjir ah oo ku yimid sida ay hadda wax yihiin” waxayna leeyihiin “cawaaqib fog oo suuragal ah in qarax uu ka dhasho”.
Sida ku cad xaaladdii la cadeeyay 1967, Muslimiinta kaliya ayaa ku tukan kara gudaha al-Haram al-Sharif, oo sidoo kale loo yaqaan masaajidka Al-Aqsa, oo ka kooban 14 hektar (35 hektar).
Dadka aan muslimiinta ahayn way booqan karaan laakiin kuma tukan karaan goobta. Raiisel wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu wuxuu ku xaqiijiyey xaaladan sida dhabta ah cadeyn rasmi ah sanadkii 2015.
Si kastaba ha noqotee, qodob ku jira heshiisyadii dhowaan dhex maray Israel iyo dowladaha Khaliijka Carabta ayaa muujinaya in tani aysan sii ahaan doonin kiiska.
Sida lagu sheegay bayaanka wadajirka ah ee u dhexeeya Mareykanka, Israel, iyo Imaaraatka ee uu sii daayay 13-kii Ogosto Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump: “Sida ku cad Aragtida Nabadda, dhammaan Muslimiinta ku soo nabad noqda way booqan karaan oo ku tukadaan Masjidka Al-Aqsa iyo goobaha kale ee barakaysan ee Yeruusaalem inay ahaadaan kuwa u furan dadka cibaadada ku cibaadaysta ee diimaha oo dhan. “
Baxreyn waxay raacdaa Imaaraadka si ay caadi uga dhigto xiriirka ay la leedahay Israel
Laakiin Israel waxay ku qeexday Al-Aqsa inuu yahay qaab dhismeedka hal masjid, sida hadalka loo yiri, warbixinta TJ ayaa cadeysay.
“Sida laga soo xigtay Israel [iyo sida muuqata Maraykanka], wax kasta oo buurta ku yaal oo aan ahayn qaab dhismeedka masaajidka waxaa lagu qeexay ‘mid ka mid ah goobaha kale ee barakaysan’ ee Qudus ‘waxayna u furan tahay salaadda dhammaan – xitaa Yuhuudda,” ayaa lagu yiri warbixinta. .
“Xulashada ereygan ma ahan mid aan kala sooc lahayn iyo mid khaldan toona, loomana arki karo wax uun laakiin iskuday khiyaano ah oo qarsoodi ah oo looga tagayo albaabka ballaaran ee salaadda Yuhuudda ee Buurta Macbadka, taas oo si xag-jir ah u beddelaysa sida ay hadda tahay.”
Isla hadalkaas ayaa lagu soo celiyey heshiiskii lala galay Bahrain, oo lagu dhawaaqay Jimcihii.